Gabdhaha USA oo gaaray Afar dhammaadka Koobka Adduunka Dumarka 2019 kaddib markii ay reebeen marti-geliyeyaasha tartanka ee France… + SAWIRRO – Gool FM
Gabdhaha USA oo gaaray Afar dhammaadka Koobka Adduunka Dumarka 2019 kaddib markii ay reebeen marti-geliyeyaasha tartanka ee France… + SAWIRRO
(Paris) 28 Juunyo 2019. Xulka gabadha USA ayaa iska xaadiriyey afar dhammaadka Koobka Adduunka Dumarka, kaddib markii ay reebeen marti-geliyeyaasha tartanka sanadka ee France.
Kulankan adag ayaa waxa uu dhexmaray labada xul ee France oo marti-gelinaya sanadkaan Koobka Adduunka ee Dumarka 2019 iyo xulka difaacanaya koobka Sanadkaan ee USA.
Waxaa goolka la horreeyey xulka USA oo gool kaga naxsaday marti-geliyeyaasha koobka Adduunka haweenka sanadkan ee France, waxaana 5’daqiiqo bilowgii ciyaarta ugu shubtay gabadha weerarka uga dheesha xulka Mareykanka ee Megan Rapinoe, sidaas ayaana lagu kala nastay 1-0 ay ku gacan sarreeyeen gabdhaha USA.
Waxaa xusid mudan in macallin Jose Mourinho oo horay u soo maamulay kooxaha Inter Milan, Chelsea iyo Manchester United uu kulankan xaadir ahaa oo uu daawanayey.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay xulka USA ayaa hoggaanka ciyaarta sii dheereystay waxaana markale shabaqa soo taabatay 65’daqiiqo Megan Rapinoe, kaddib caawin kaga timid,Tobin Heath kulanka ayaana sidaas ku noqday 2-0 looga gacan sarreeyey France.
Marti-geliyeyaasha tartanka ee France ayaa hal gool iska soo guday waxaana u dhaliyey 81’daqiiqo Wendie Renard, kaddib caawin ay ka heshay Gaetane Thiney, kulanka ayaana sidaas ku noqday 2-1 weli looga gacan sarreeyey xulka France.
Inkastoo ay isku dayeen inay goolka labaad ugu yaraan soo barbareeyaan gabdhaha France haddana uma suuro-gelin kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-1 ay ku adkaadeen gabadhaha USA.
Xulka gabadha USA ayaana iska xaadiriyey afar dhammaadka Koobka Adduunka dumarka 2019, iyagoo koobka ka reebay xulkii sanadkan tartanka marti-gelinayey ee France.
Xulka qaranka Morocco oo guul kaga gaaray Ivory Coast kulan ka tirsan Koobka Qarammada Afrika 2019… + SAWIRRO